नौटंकीको पराकास्टा-नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप अधिवेशन :: Setopati
नौटंकीको पराकास्टा-नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप अधिवेशन
शशि ढकाल डेनमार्क (कोपनहेगन), चैत २५
ब्यापक विवाद र असहमतिबीच नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप (एफएनजे युरोप) शाखाको नयाँ कार्यसमिति सर्वसहमतीमा मिलाईएको घोषणा गरिएको छ।
जुमप्रविधिमार्फत मार्च २६ मा भएको अधिवेशनबाट प्रेम परियारको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भयो। जुममा सहभागीको माइक अफ गर्नेदेखि बारम्बार उच्च तथा केन्द्रिय प्रतिनिधिले मिटिङ छोड्दै र जोडिदै भएकमो सम्मेलनले परियारको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको हो।
यस्तै असन्तुष्ट अर्को पक्षले शनिबार सरस्वती कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन भएको घोषणा गर्‍यो।
प्रेम परियार अध्यक्ष घोषणा गरिएको अधिवेशनमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेश चाम्लिङको संयोजकत्वमा डा. उदयदेव आचार्य सदस्यसचिव रहेको निर्वाचन समिति गठन गरिएको थियो भने केन्द्रका प्रतिनिधि चिरन शर्मा थिए।
यता कार्कीलाई अध्यक्ष बनाएको अधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीलाई नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य गोपाल बराइलीले सपथ गराई आधिकारिता दिएका थिए ।
परियारको कमिटीमा संरक्षकसहित ३३ जनाको कमिटि छ भने कार्कीको कमिटीमा दुई जना सल्लाहकार सहित १४ जनाको कमिटि छ।
यसरी बिजोगै बिजोगबीच नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको अधिवेसन सकिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखा स्थापनाकालदेखिनै विवादित छ। सन् २०१२ मा फ्रान्समा भएको पहिलो अधिवेशनदेखिनै एक राजनीतिक पक्षले अर्को राजनीतिक पक्षलाई सदस्यबाट नै बन्चित गराउने खेल खेलेकोले आजको अवस्था देखिएको हो।
युरोपबाट स्वत्रन्त्र पत्रकारिता गर्नेलाई या त सदस्य बन्नबाटै बञ्चित गरिएको छ या उनीहरूनै महासंघको घिनलाग्दो राजनीतिबाट टाढै बसेर पत्रकारितामा रमाइरहेका छन्।
खिचातानी वा विवादको मुख्य जड
राजनीतिक कार्यकर्ता मात्र महासंघको सदस्य बन्ने भए। यसका लागि उनीहरूलाई विधि विधान, नीति नियम केहि पनि चाहिएन। राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनमा आवद्ध भएकै कारण उनीहरू सदस्य भए। यस्तो हुँदा एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध र कारबाही गर्ने लामो सिलसिला चलिरह्यो। जसकारण धेरै ब्यक्तिहरू सदस्य बन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि सदस्य बन्नबाट बन्चित भए।
एकतर्फी रूपमा सदस्य वितरण गरेर सदस्य बनाइएपछि सरस्वती कार्कीलाई अन्तिम समयमा केन्द्रिय प्रतिनिधिको हस्तक्षेपपछि मात्रै सदस्य दिइएको थियो। विगतमा नेपालदेखि नै पत्रकारिता गर्दै आएकी र युरोप शाखाको संस्थापक सदस्य समेत रहेकी कार्कीले अधिवेशनको सदस्यमा आफ्नो नाम नदेखेपछि नेपाल पत्रकार माहासंघ केन्द्रिय कार्यलय काठमाडौंमा अधिवेशनको दुई दिन अगाडि मात्र उजुरी दर्ता गराएकी थिइन्।
सोही कारण कार्कीसहित अम्मई समूहले अधिबेशन बहिस्कार गरे। यसको मुख्य कारण दुई पटक अध्यक्ष भईसकेका केजिन राईले सबै पक्षलाई बाहिर राखेर विधानमै नभएको तेस्रो पटक पनि अध्यक्ष हुन् मरिहत्ते गर्नु नै हो। उनले तेस्रो पटक पनि उम्मेद्वारी दिएर पुनः वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएरै छाडे।
नाटक - नौटंकीको पराकास्टा
कार्की-अम्माइ समूहले अधिवेशननै बहिस्कार गरेपछि केजिन समूहको मात्रै भर्चुअल अधिवेसन भयो। कुल ५९ जना सदस्य बनेका युरोप शाखामा ३८ जना उपस्थिति भए।
एउटै पक्षमा भए पनि अध्यक्षका लागि केजिन राई, महेश कुमार खाती, द्रोण रिजाल, सरला कट्टेल र प्रेम परियारले उमेद्वारी दिए। दुई जनाले उमेद्वारी फिर्ता लिए पनि केजिन राई, प्रेम परियार र महेश खाती जना चुनावी प्रतिश्पर्धामा उत्रिए।
लामो खिचातानी पछि महेश खातीले उमेद्वारी फिर्ता नलिए पछि केजिन राईले प्रेम परियारलाई समर्थन गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा झरे। तर खातीले छोडेनन्। स्थिति अत्यन्तै तनावपूर्ण भएपछि केजिन राईलगायत राजेश चाम्लिङ र चिरन शर्मा जुम मिटिङ छोडेरै अर्को मिटिंगमा लागे।
अध्यक्ष पदका उमेद्वार महेश खातीका अनुसार उनीहरु जुममा उपस्थित हुँदै निक्लदैं गरे। लामो अनुपस्थिति पश्चात राजेश चाम्लिङ र चिरन शर्माले प्रेम परियारको अध्यक्षतामा बाँकी कार्यसमितिका नामावली सर्बसम्मत भएको भन्दै निर्वाचन औपचारिक रूपमा समापन भएको जबरजस्ती घोषणा गरे। ‘मेरो असहमति बिनानै मेरो नाम वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राखे र बाँकी नाम केजिन राईले दिए अनुसार घोषणा गरियो’, खातीले भने।
अध्यक्षमा उमेद्वारी दिएका खातीले विरोध गरे पनि उनको माइक्रोफोन अफ गरियो। नामावली घोषणा गर्दा पनि खातीको माइक्रोफोन बन्दनै थियो। ‘म यसलाई मान्दै मान्दिनँ तपाईहरू बिधि, पद्धति र विधान मिचिरहनुभएको छ, मैले पनि उमेद्वारी दिएको छु। मेरो सुनवाई भएन,’ खाती भन्दै थिए। पुनः उनको माइक्रोफोन अफ गरियो।
आफ्नो कुराको कुनै सुनुवाई नभई जबरजस्ती गरेको अधिवेशन पछि उनी अलमलमा छन्। ‘म जस्तो पत्रकार बोल्ने भनिएको ब्यक्तिको आवाज त यसरी दबाइयो भने अरूको के हाल होला? यो संगठन नै होइन। तर अब अरू विकल्प छैन यहीँ भित्र बसेर नै संघर्ष गर्ने हो, बिद्रोह गर्ने हो, संगठनलाई विधि विधान अनुसार चलाउने हो’, उनले भने।
तीन कार्याकालसम्म महासंघको नेतृत्व गरेका केजिन आफैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर नौं-नौ जना उपाध्यक्ष, पाँच जना सचिवसहित ५९ जना सदस्य बनेका युरोप शाखामा ३८ जनाको उपस्थितिमा संरक्षक सहित ३३ जनाको कमिटि नैं बनाइयो। कोषाध्यक्षमा बाबा राजेश्वरी थापाले उमेद्वारी दिए पनि थापाको नाम निकालेर केजिन राईकै श्रीमती ईन्दिरा चाम्लिङलाई बनाइयो।
आफू अध्यक्ष घोषणा हुँदा नेपालतिर रहेका अध्यक्ष प्रेम परियारलाई केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले खादा ओढाएर बधाई दिए।
विवाद त साह्रो भए छ नि सर भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘सर्वसहमती भित्र केही असहमती पनि छन्। नयाँ कार्यसमिति सर्वसहमतीमा मिलाईएको हो। अध्यक्षका उम्मेदवार महेश कुमार खातीले झिनो विरोध गर्नुभएको थियो। उहाँ अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले टिममा बसेर सहयोग गर्ने भनिसक्नुभएको छ।’
उनले निर्वाचनमा असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाएर युरोप शाखाको विधिविधान अनुसार एक भएर अघि बढ्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए।
यस्तै नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरस्वति कार्कीका अनुसार विगत लामो समयदेखि उनी नेपाल र डेनमार्कमा रही पत्रकारिता गर्दै आएकी सञ्चारकर्मीको रूपमा परिचित छिन् भने युरोप शाखाको संस्थापक सदस्य पनि हुन्। त्यस्तै उनले युरोप शाखा स्थापना भएको करिव १० वर्षपछि चौथो महाधिबेशनबाट अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिला भएको भन्दै समाचारसमेत सार्वजनिक भए।
उनले पदकै कारण संस्था विवादित भएको भन्दै पदमा लिसोझैँ टासिने र फरक मत राख्नेलाइ कारबाही गर्नेदेखि सदस्यतानै नदिनेसम्म हुने गरेपछि यो परिस्थिति आएको बताइन्।
‘हाम्रो माग भनेको सबैभन्दा पहिले गैर पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्न छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने हो’, उनले भनिन्, ‘त्यसरी छानबिन समितिबाट आएका सदस्यबीच अधिवेशन गरि निर्वाचन गर्ने भए हामी सहमतिमा आउन तयार छौं जुन कुरा हामीले केन्द्रमासमेत राखेका छौं। आशा गर्छु केन्द्रले उचित निर्णय लिन्छ होला। अन्यथा हामी युरोपमा समानान्तर महासंघ कायमनै राख्छौ।’
यस्तै अधिवेशन सम्पन्न गर्न चयन भएका केन्द्रिय प्रतिनिधि चिरन शर्माले सहमतिका लागि आफूले हदैसम्मको कोशिश गरेको बताए।
चरण चरणमा वार्ता गर्नदेखि इच्छुक सबैलाई सदस्य बनाइदिने बाचा गरे पनि सहमतिमा ल्याउन नसकिएको उनले तर्क गरे।
‘सबैका कारबाही, निलम्बन फुक्का गर्ने जिम्बेवारी नै लिएँ। प्राविधिक कारणबस रोकिएको सरस्वतीको सदस्यता अन्तिम अबस्थामा मैलेनै दिलाएँ। अधिवेशनमा अर्को पक्षलाई पनि समेट्न खोजेँ। पटक पटक सामूहिक र व्यक्तिगत वार्ता पनि गरेँ। तर अध्यक्ष पद दिए आउने, नत्र नआउने भएपछि कुरा मिलेन’, उनले भने, ‘त्यही भएर एक पक्षीय भए पनि अधिवेशन गरेको हो।’ उनले यहाँजस्तो वाहियात राजनीति त नेपालमा पनि नभएको गुनासो गरे।
प्रेम परियार समूह
संरक्षक - पञ्चम अधिकारी , पुष्प बरूवाल, राजकुमार दिक्पाल
अध्यक्ष - प्रेम बहादुर परियार
बरिष्ठ उपाध्यक्ष - केजिन राई , महेस कुमार खाती
उपाध्यक्ष - राजकुमार थापा , रविचन्द्र भट्टराई ,प्रेमचन्द्र पोमु , वाईबि गुरूङ, दिल निशानी मगर , जंगम खड्का, दिपेन्द्र गजुरेल ,
महासचिव - द्रोण रिजाल ,
सचिव - महिँदो वाइबा, शेरबहादुर परियार , सरल कट्टेल , कलस खरेल , कमल पराजुली।
कोषाध्यक्ष - इन्दिरा चामलिङ
सदस्यहरू - बिरमान मगर , युवराज फुयाँल, दिनेश गौतम, गोमा खरेल, निराजन श्रेष्ठ, कृष्ण तिवारी, शान्ति अर्याल, अनिल पौडेल, भेषबहादुर काउरा, रमेशराज बाँस्तोला, ल्हकपा तेन्जी शेर्पा, किशोर लिम्बु।
सरस्वती कार्की समूह
अध्यक्ष - सरस्वती कार्की (डेनमार्क)
उपाध्यक्ष - लक्ष्मण देवकोटा (स्विजरल्याण्ड) र टेक गिरी (नर्वे)
सचिव - अनुराधा पौडेल (फ्रान्स)
सहसचिव - भोला लामिछाने (स्पेन)
कोषाध्यक्ष - ल्हाक्पा तेन्जी लामा (रोमानिया)
सदस्यहरू: वसन्त रानाभाट (स्पेन), हिरालाल श्रेष्ठ (स्विजरल्याण्ड),बिष्णु शर्मा पौडेल (डेनमार्क), दिपक धिताल (जर्मनी) र सरोज ढुंगाना (नर्वे)
सल्लाहकार- युरोप शाखाका पूर्वअध्यक्ष महेश थापा र पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिल्ली अम्माई।
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७, १७:२२:००
सत्ता गठबन्धन टुटाउन कतै प्वाल छ कि भनेर टर्च बालेर हेरिरहेका छन् : प्रचण्ड
नेपाल-बङ्गलादेश व्यापारमा आयात बढी, निर्यात कम
गुरुहरूलाई कोटी-कोटी नमन!
घुम्न जाऊँ है सोलुको दूधकुण्ड (तस्बिरहरू)
हजुर पनि मेरो गुरु बनिदिने कि
रोग लागेर सुपरहिरो भएका पात्रको कथा, हेर्नुहोस् युट्युबमा
लागुऔषधको विवादमा तीन जना मिलेर इटहरीमा एक व्यक्तिको अपहरण
मध्याह्न अघिनै अस्ताएका सन्त
आमाको गरमकोट पुरुषोत्तम दाहाल